एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा – Khel Dainik
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा
पोखरा (खेलदैनिक) । विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ फुटबल क्लब यहाँ जारी २०औं आहा! रारा गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा एपिएफले दश खेलाडीमा खुम्चिएको लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई ३–१ ले हराउँदै फाइनल स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको हो ।
पोखरा रंगशालामा सम्पन्न खेलमा अग्रता पनि एपिएफले बनाएको थियो । २५औं मिनटमा सनिस श्रेष्ठको गोलबाट अग्रता लिएको विभागीय टोलीले त्यो अग्रता पहिलो हाफ मै गुमाउन पुग्यो । ४०औं मिनटमा नुरैन करिमले मच्छिन्द्रका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
पहिलो हाफ बराबरी मै सकिए तापनि दोस्रो हाफमा भने एपिएफले पकड बनायो । ६८औं मिनटमा प्रदिप लामाले एपिएफका लागि दोस्रो गोल थपे । त्यसको केही मिनट लगतै मच्छिन्द्रका गोलकर्ता करिमले रातो कार्ड खाँदै मैदान छाडेपछि टोली दश खेलाडीमा खुम्चिन पुग्यो । जसको फाईदा एपिएफले नै उठायो ।
खेलको अन्तिमतिर एपिएफका कप्तान नविन लामाले तेस्रो गोल थप्दै टोलीको उत्कृष्ट जित र फाइनल यात्रा सुनिश्चित गरे । खेलमा एपिएफका प्रदिप लामा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले पुरस्कार वापत नगद ८ हजार र ट्रफी हात पारे ।
प्रतियोगिता अन्तरगत माघ १३ गते बिहीबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेल एनओसी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
← मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर →